9-Me-BC अनुभव: तपाईका बारे7तथ्यहरु जान्नु आवश्यक छ
9-ME-BC के हो?
--Me-BC (--Methyl-car-carboline) पनि 9-MBC को रूपमा चिनिन्छ एक β-carboline समूहबाट एक उपन्यास nootropic यौगिक हो। Β-Carbolines विषम कार्बोलाइन परिवारबाट आउँदछ। यसको अर्थ तिनीहरू दुबै मानव शरीरमा अन्तर्जात रूपमा उत्पादन हुन्छन् र निश्चित फलहरू, पकाएको मासु, सुर्तिजन्य धुँवा र कफीमा पनि उत्पादन गर्दछन्।
Β-Carbolines (BCs) न्यूरोटोक्सिकको रूपमा पहिचान गरिएको छ, तथापि, हालसालै यो पत्ता लाग्यो कि--Me-Bc फाइदाजनक छ। 9-Me-BC डोपामिनर्जिक न्यूरोप्रोट्याक्टर हो जसले संज्ञानात्मक प्रकार्य पनि बढाउँदछ।
9-Me-BC पाउडर साथ साथै 9-Me-BC क्याप्सूल पूरै फारम एक उत्कृष्ट Nootropic हो। अन्य nootropics जसको फाइदा केहि घण्टा पछि फिक्का विपरीत, 9-Me-BC लामो दिगो र लामो प्रभाव प्रदान गर्दछ।
Phcoker एक पेशेवर निर्माता 9-me-bc पाउडर उत्पादन गर्न को लागी हो
चाँडै अनुसन्धान पठाउनुहोस्: सम्पर्क हामीलाई
9-ME-BC पाउडर- यसले कसरी काम गर्दछ?
--Me-BC धेरै राम्रो गोलाकार nootropic हो जुन कार्यको धेरै मोड प्रदर्शन गर्दछ। कार्यको धेरै--मी-बीसी संयन्त्रहरूले यसलाई आफ्नो कार्यको क्रममा धेरै प्रभावकारी हुन सक्षम गर्दछ।
9-Me-BC कार्यविधिहरू तल छन्;
यसले मस्तिष्कमा डोपामाइनको स्तर बढाउँछ डोपामाइनको विघटन रोक्दै, क्याफिन जस्ता अन्य उत्तेजकहरू भन्दा भिन्न छ कि अत्यधिक विमोचन र प्रयोगको कारण डोपामाइन कम गर्दछ।
--मी-बीसी डोपामाइन गतिविधि उत्तेजित गर्दछ, भिन्न पार्छ र साथ साथै मस्तिष्कमा न्युरोन, डेन्ड्राइट र synapses को रक्षा गर्दछ। यसैले यसले सिक्ने क्षमता बढाउनको लागि सक्षम छ, स्मृति र संज्ञानात्मक प्रकार्य
यसले टायरोसिन किनासेससँग अन्तर्क्रिया गर्दा टायरोसिन हाइड्रोक्लाइसे (TH) र यसको ट्रान्सक्रिप्शन तत्वहरूलाई प्रभाव पार्छ। टायरोसिन किनासेसले एल-टायरोसिनलाई एल डोपामा रूपान्तरण गर्न डोपामाइनको संश्लेषणको लागि जिम्मेदार भूमिका खेल्छ।
--मी-बीसीले मोनोमाइन अक्सिडेज ए र बी लाई रोक्छ (एमएओए र एमएओबी) यसैले डोपोमिन मेटाबोलिसनबाट डीओपीएसी जस्ता न्यूरोटाक्सिक यौगिकहरूको उत्पादन रोक्दछ। यी पदार्थहरूले डोपामिनर्जिक न्यूरन्सको मृत्यु गराउँदछ।
--मी-बीसीले माइटोकन्ड्रियल श्वासप्रश्वास श्रृंखला बढाउँदछ। यसले या त बढाएर वा NADH डिहाइड्रोजनेस लाई संरक्षण गरेर हासिल गर्दछ, जुन ऊर्जा उत्पादनको लागि इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर प्रक्रियामा प्रयोग हुन्छ।
--मी-बीसीले तंत्रिका वृद्धि कारक (एनजीएफ), एसएचएच (सोनिक हेजहोग सिग्नलिंग अणु), ब्रेन-व्युत्पन्न न्युरोट्रोफिक कारक (बीडीएनएफ) जस्ता न्यूरोट्रोफिक कारकहरू पनि बढाउन सक्छ जुन संज्ञानात्मक समारोह, फोकस र प्रेरणा बढाउँदछ।
यसले न्युरोनल गतिविधिलाई उत्तेजित गर्दछ जबकि नयाँ न्युनन्सको बृद्धिलाई बढावा दिन्छ। यसले मेमोरी र सिक्ने र सामान्य संज्ञानात्मक प्रकार्य बढाउँछ।
विरोधी भड़काउने गुणहरू। --Me-BC मस्तिष्कमा सूजन को लागी जीर्ण सूजन संग लड्न को लागी साईटोकिन्स को कम गर्दछ, जो microglial संचयको कारण परिचित छ जुन परिणत संज्ञानात्मक कार्यमा बाधा पुर्‍याउँछ।
9-ME-BC लाभ - कसरी 9-ME-BC पाउडर (Nootropic) तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ?
9-Me-BC पूरै स्वास्थ्य लाभ को एक विस्तृत श्रृंखला को मालिक। बिभिन्न 9-Me-BC सुविधाहरू यसले प्रदर्शन गर्ने धेरै मोडहरूको परिणामको रूपमा हुन्।
तल 9-Me-BC सुविधाहरू छन्;
i. शिक्षा, स्मृति र अनुभूति सुधार गर्न सक्दछ
9-Me-BC ले न्युरोन गतिविधि उत्प्रेरित गर्छ साथै नयाँ न्युरोन कोषहरूको बृद्धि गर्दछ। यो शिक्षालाई अभिवृद्धि गर्नमा धेरै महत्वपूर्ण छ, स्मृति र सामान्य संज्ञानात्मक प्रकार्य।
9-Me-BC पनि ATP लाई बढावा दिनुहोस् माइटोकन्ड्रियल श्वसन श्रृंखला बढाउँदै उर्जा उत्पादन। यसैले बढेको उर्जा जुन प्रेरणा र सतर्कता बढाउँछ।
मुसाको अध्ययनमा, १०-दिनको लागि दिइएको--Me-BC पूरक शिक्षा सिक्नको लागि फेला पर्‍यो। अध्ययनले रिपोर्ट गरेको छ कि यो डोपामाइनको स्तर बढेको कारण synapses र dendrites को विकास लाई बढावा दिँदै आएको हो।
Ii। सूजन लड्न मद्दत गर्दछ
सूजन एक प्राकृतिक संयन्त्र हो जसद्वारा शरीर संक्रमण वा घाइते विरूद्ध लड्छ। यद्यपि, पुरानो सूजन शरीरको लागि हानिकारक हुन सक्छ र मधुमेह र क्यान्सर जस्ता धेरै रोगहरूसँग सम्बन्धित छ।
तसर्थ यो तपाईंको शरीरमा हानिकारक हुनु अघि यो जलनलाई रोक्न आवश्यक हुन्छ। भाग्यवस, 9-Me-BC पाउडरले पुरानो सूजन रोक्न मद्दत गर्दछ। यसले भड़काउने साइटोकिन्सलाई घटाएर सूजन लड्छ।
Iii। कामेच्छा बढाउन सक्छ
9-Me-BC nootropic यौगिक धेरै डोपामिनर्जिक हो। डोपामिनर्जिक यौगिकहरू दिमागमा डोपामिनको स्तर बढाउन परिचित छन्। यसले बदली कामवासनासँग नजिकको डोपामाइन गतिविधि बढाउँदछ।
iv। खेलाडीको प्रदर्शन बढाउन सक्छ
ऊर्जा उत्पादन बढाउनको लागि 9-Me-BC को क्षमता र मुड र उत्प्रेरणाले यसलाई एथलीटहरूको प्रदर्शन सुधार गर्न एक सम्भावित उम्मेदवार बनाउँदछ।
9-Me-BC अनुभव: 9-MBC कसरी प्रयोग गर्ने?
सिफारिश गरिएको--Me-BC खुराकले दैनिक one-Me-BC क्याप्सूल लिइरहेको छ। एउटा--Me-BC क्याप्सूल--Me-BC पाउडरको १ mg मिलीग्राम बराबर छ।
यो बिहान--Me-BC क्याप्सूल लिन सल्लाह छ किनकि यो सतर्कता, मुड, र प्रेरणा बढाउनको लागि परिचित छ, जुन तपाईंलाई निश्चित रूपमा दिनको क्रियाकलापहरूको समयमा आवश्यक पर्दछ।
यो 9-MBC प्रयोग गर्न को लागी सुरक्षित छ र कानूनी हो? 9-me-bc जोखिमहरू?
--MBC सामान्यतया एक सुरक्षित मानिन्छ आहार पूरक। एउटा पशु अध्ययनबाट,--Me-BC nootropic १० दिनको लागि प्रशासित पूर्ण रूपमा सुरक्षित फेला पर्‍यो।
यद्यपि, कुनै विस्तारित समयको लागि--Me-BC पूरकको प्रयोगको सम्बन्धमा कुनै डाटा उपलब्ध छैन र यस 9-Me-BC Nootropic सम्बन्धमा धेरै दुर्लभ क्लिनिकल परीक्षणहरू।
तसर्थ यो ध्यान दिनुहोस् जब यो नूट्रोपिक लिईरहेको बेला बिचमा ब्रेक गरेर कुनै पनि सम्भावित 9-Me-BC उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमहरू जोगिन हो।
9-Me-BC पूरक संसारभरका प्रत्येक देशहरुमा वैध छ। यो वर्गीकृत र एक आहार पूरक को रूपमा बेचिन्छ त्यसैले खाद्य र औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थ को रूप मा नै नियमित छ।
यो कसैको लागि anyone-Me-BC पूरक खरीद गर्नका लागि कानूनी हो। जे होस्, 9-Me-BC लाई कानूनी रूपमा सुरक्षित मानिँदै छ, एक व्यक्तिलाई सल्लाह दिईन्छ कि यसमा लिप्त हुनु भन्दा पहिले उनीहरूको चिकित्सकसँग परामर्श लिनु पर्छ।
9-Me-BC साइड इफेक्टहरू
जे होस् 9-Me-BC पूरक सामान्यतया सुरक्षितको रूपमा लिइन्छ, त्यहाँ दुई मुख्य सम्भाव्य 9-Me-Bc साइड इफेक्टहरू छन् जुन तपाईले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ;
फोटो संवेदनशीलता - सूर्यको प्रकाशको लामो सम्पर्कमा प्रयोग गर्नु हुँदैन 9-Me-BC पूरक किनकी यसले UV रेको जोखिमको कारण DNA लाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ। यदि तपाईं सूर्यको किरणमा हुनुपर्‍यो भने भनिएको--मे-बीसी साइड इफेक्टबाट बच्नको लागि सनस्क्रीन आवश्यक पर्दछ।
डोपामाइन न्यूरोटोक्सिसिटी पनि हुन सक्छ; जे होस्, यो तब हुन्छ जब तपाईं सिफारिश गरिएको--Me-BC खुराक भन्दा बढी गर्नुहुन्छ। त्यसकारण, सिफारिश गरिएको--Me-BC खुराक लिनबाट बच्न सकिन्छ।
अन्य--Me-BC साइड इफेक्टहरू जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई रिपोर्ट गरेका छन् उनीहरूले 9-Me-BC अनुभव साझा गरेका बान्ली र टाउको दुखाइ समावेश गर्दछ। जे होस्, यी प्रतिकूल प्रभावहरू धेरै दुर्लभ छन् र केवल जब एकले 9-Me-BC पूरकको एक ओभरडोज लिन्छ।
9-me-bc (nootropic) को कसले फाइदा लिन सक्छ?
सामान्यतया सबैले लाभ लिन सक्नेछन् 9-Me-BC Nootropic बाट। यद्यपि व्यक्तिहरूको केही समूहले--Me-BC भन्दा अरुलाई भन्दा बढी फाइदा लिन सक्दछन्। श्रमिकहरू, विद्यार्थी र एथलीटहरूले प्रशस्त गरी काट्न सक्छन् --Me-BC लाभहरू.
किनकि, 9-मी-बीसी एकदम राम्रो गोलो र धेरै डोपामिनर्जिक हो, सतर्कता बढाउन चाहने विद्यार्थीहरूको लागि यो उत्कृष्ट उत्कृष्ट पूरक हो, अझ बढी सम्झनको लागि उनीहरूको सिकाई र मेमोरीमा सुधार गर्दा सिक्नको लागि प्रेरणा।
कार्यले तनाव र पानी निकाल्न सक्छ, तर भाग्यवस 9-मी-बीसी प्रेरणा र ऊर्जा प्रदान गर्दछ जसले काममा तपाईंको दक्षतालाई बढावा दिन्छ। यसले न्यूरन्सहरूलाई उत्तेजित गर्दछ जसले तपाईंलाई सम्पूर्ण तरिकाले केन्द्रित राख्दछ।
9-Me-BC समीक्षाका प्रयोगकर्ताहरू धेरै सकारात्मक छन् कुनै वा सीमित साइड इफेक्टको रिपोर्ट गरिएको साथ। तसर्थ एक राम्रो पूरै सबैको लागि।
9-ME-BC पाउडर बिक्रीको लागि - कहाँ 9-ME-BC खरीद गर्ने?
9-Me-BC बिक्रीको लागि सजिलै अनलाइन उपलब्ध छ। यद्यपि, उच्च स्तरको शुद्धताको आशा राख्नुपर्दछ तपाईको लागि अपेक्षित परिणामहरू प्राप्त गर्न। 9-Me-BC समीक्षा विचार गर्नुहोस् प्रयोगकर्ताहरूबाट सबै भन्दा राम्रो 9-Me-BC क्याप्सूल वा पाउडर पूरकको अंतर्दृष्टि प्राप्त गर्न।
केवल अन्य पूरकहरू जस्तै, यो विचार गर्नु राम्रो हो कि 9-Me-BC जोखिमहरू देखा पर्न सक्छ र आवश्यक सावधानीहरू लिन सक्छ।
9-Me-BC का धेरै प्रयोगकर्ताहरू यसलाई अनुमोदितबाट खरीद गर्छन् nootropics आपूर्तिकर्ता जसले high-Me-BC धेरै उच्च गुणमा बिक्रीको लागि प्रस्ताव गर्दछ।
जब तपाईं 9-Me-BC खरीदको थोरै परिमाणमा बिक्रीको लागि 9-Me-BC प्रस्ताव गर्ने कम्पनीहरूबाट खरीद छुटमा छुटका मूल्यहरूको आनन्द लिनका लागि विचार गर्नुहुन्छ।
गिल जी।, ग्रस एम।, स्मिट ए, ब्राउन के।, एन्जेन्स्पर्गर सी।, फ्लेक सी। र एपेन्रोथ डी। (२०११) Meth-मिथाइल-बी-कार्बोलिनले मुसामा सिक्ने र मेमोरी सुधार गर्दछ। न्युरोडोजेन। Dis ,, १ 2011।
ग्रस, एम।, अपेन्रोथ, डी, फ्लुबाकर, ए, एन्जेन्स्पर्गर, सी, बक, जे।, फ्लेक, सी,… ब्राउन, के। (२०१२)। 9-Methyl-car-carboline प्रेरित संज्ञानात्मक वृद्धि एलिभेटेड हिप्पोकैम्पल डोपामाइन स्तर र डेन्ड्रिटिक र synaptic प्रसार संग सम्बन्धित छ। न्यूरोकेमिस्ट्री जर्नल, १२१ ()), – २–-–121१।doi: 10.1111 / j.1471-4159.2012.07713। x
हामान, जे।, वेर्निक, सी।, लेहमान, जे।, रेचमान, एच।, रोमेलस्पाचर, एच। 9-Methyl---carboline up meferencesphalic संस्कृतिमा विभेदित डोपामिनर्जिक न्यूरोनको उपस्थिति नियमन गर्दछ। न्यूरो रसायन इंटरनेशनल, (२ (-52--4), – 5–-–००।doi: १०.१०१ / / j.neuint.10.1016।
पोलान्स्की डब्ल्यू।, एन्जेन्स्पर्गर सी।, रेखमान एच। र गिल जी। जे न्यूरोचेम। ११2010, १– ––-१9।।
वेर्निक, सी।, हेल्मान्, जे।, जिबा, बी, कुटर, के।, ओसोस्का, के।, फ्रेन्जेल, एम।, रोम्मेलपाचर, एच। (२०१०)। 2010-Methyl-b-carboline पार्किन्सन रोगको एक जनावरको मोडेलमा पुन: संयमित प्रभाव पार्दछ। औषधि रिपोर्ट, १।।
१- कुन 1-ME-BC छ?
2.9-ME-BC पाउडर- यसले कसरी काम गर्दछ?
3.9-ME-BC सुविधाहरू - कसरी 9-ME-BC पाउडर (Nootropic) ले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ?
4।--Me-BC अनुभव:--MBC कसरी प्रयोग गर्ने?
I. के यो सुरक्षित र--MBC प्रयोग गर्न कानूनी हो? 5-me-bc जोखिमहरू?
W. me-me-bc (nootropic) को कसले फाइदा लिन सक्छ?
7.9-ME-BC पाउडर बिक्रीको लागि - कहाँ 9-ME-BC खरीद गर्ने?